FTA na -agba ndị ụlọ ọrụ ụgbọ njem US ume ka ha mụbaa ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Transportation » FTA na -agba ndị ụlọ ọrụ ụgbọ njem US ume ka ha mụbaa ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Ịtụ egwu • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Rail njem • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Nchịkwa Federal Transit Administration (FTA) na -akpọku ndị isi ụgbọ njem ka ha kesara ndị ọrụ ozi a, na ime ihe niile ị nwere ike ime iji gbaa ọgwụ mgbochi ọrịa n'etiti ndị ọrụ gị.
Ọnụ ọgụgụ ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 na-abawanye na USA niile.
Enweghi mmasị na ọgwụ mgbochi adaala na mba a.
Ndị ụlọ ọrụ na -ahụ maka njem na US gbara ume ka ha hụ na ịgba ọgwụ mgbochi nke ndị ọrụ na -ebugharị.
Ka ọnụ ọgụgụ ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 na-aga n'ihu na-agbago na United States States, Federal Transit Administration (FTA) na-agba ndị ụlọ ọrụ na-agafe agafe ume ka ha hụ na ndị ọrụ na-ebugharị ha na ndị obodo nwere ohere ọ bụla iji nweta ọgwụ mgbochi ahụ.
Dị ka Mayo C si kwuolinic na Ụlọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa (CDC), n'ime ọnwa abụọ gara aga, ọtụtụ ndị America amalitela ịgba ọgwụ mgbochi megide COVID-19. Ọ bụ n'oge ahụ ka nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ kwadoro ọgwụ mgbochi Pfizer-BioNTech COVID-19 na Ọgọst 23.
Enweghi mmasị na ọgwụ mgbochi adaala, dịka ntuli aka Ipsos mere n'oge na -adịbeghị anya. Naanị pasent 14 nke ndị America na -ekwu ugbu a na ha agaghị enwe ike ịgba ọgwụ mgbochi.
Nchịkwa Federal Transit Administration (FTA) na -akpọku ndị isi ụgbọ njem ka ha soro ndị ọrụ kerịta ozi a, na ime ihe niile ị nwere ike ime iji gbaa ọgwụ mgbochi ọrịa n'etiti ndị ọrụ gị. Agencylọ ọrụ ụfọdụ enyela oge ezumike iji nweta ọgwụ mgbochi, onyinye ego, ma ọ bụ kaadị onyinye iji kpalie ndị ọrụ ịgba ọgwụ mgbochi.
Na mgbakwunye, maka ụlọ ọrụ ndị ahụ gbasiri mbọ ike ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na mpaghara gị, anyị nwere olile anya na ị ga -aga n'ihu na mbọ ndị ahụ, wee malite ndị ọhụrụ. Ọtụtụ ndị America chọrọ ọgwụ mgbochi na njem nwere ike inyere ha aka ị nweta nhọpụta ma ọ bụ weta ohere ịgba ọgwụ mgbochi n'ime obodo ha. Iji nyere aka kesaa ozi ịgba ọgwụ mgbochi na obodo gị, atụmatụ CDC dị na mpaghara maka ịla azụ nke ọgwụ mgbochi maka COVID-19 nwere ike ịchọpụta mpaghara dị na mpaghara ọrụ sistemụ mbugharị gị nke nwere ike ịchọ enyemaka ọzọ iru ọgwụ mgbochi ahụ.
Ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa bụ ụzọ kachasị dị irè iji chebe onwe gị na ndị nọ gị nso ka ha ghara ibute COVID-19. Iji bulie nchedo site na ụdị Delta ma gbochie ikekwe ịgbasa ya na ndị ọzọ, CDC na -adụ onye ọ bụla ọdụ ka ọ nweta ọgwụ mgbochi ozugbo enwere ike. FTA na -agba ndị ọrụ na -ebugharị ebugharị ihu - yana ụlọ ọrụ na -ebugharị njem ha na -arụ ọrụ - ka ha mee atụmatụ ịme onwe ha ọgwụ mgbochi ma gaa n'ihu na -eme ka ohere ịnweta saịtị ịgba ọgwụ mgbochi maka ndị otu obodo na -enwetabeghị ọnya.
FTA na -akwado mbọ ịgba ọgwụ mgbochi ụlọ ọrụ na -ebugharị site na inye onyinye n'okpuru atụmatụ nnapụta nke America iji nyere aka kpuchie mmefu ndị a yana gbaa ndị isi ụgbọ njem ume inye ọrụ na -eme ka obodo ha nwee ike, gụnyere ndị ọrụ ha, iji nweta gbaa ha. Ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem na-achọ ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara ntozu ego kwesịrị ịga leta Ajụjụ FTA gbasara COVID-19.
FTA na -agbakwa ụlọ ọrụ na -ebugharị ụgbọ mmiri ume ka ha jiri CDC, Ngalaba Ụgbọ njem US na Nchedo Ọrụ na Nchịkwa Ahụike (OSHA). ngwa ngwa iji nyere aka nwekwuo ntụkwasị obi na ị nweta ọgwụ mgbochi COVID-19 n'etiti ndị ọrụ na-ebugharị.
Dmytro Makarov sitere Ukraine, bi na United States ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 10 dịka onye ọka iwu mbụ.
Ụgbọ elu South Africa ugbu a na United Airlines na ...